To: अन्तिम पटक केसीलाई साथ दिऔं
प्रकाश थापा - मजदुरको लागि लड्ने पार्टी भनेर,
फेरि पनि बन्द सफल बनाउन,
मजदुर कै ट्याक्सी जलाउने होलानी होइन कामरेड,
बन्दलाई सफल बनाउन.
दिनकै मजदुरी गरेर खाने मजदुरको गाँस खोस्ने होलानी होइन कामरेड,
तिर्थ गुरूङ - केही समय वा महिना भयो उपत्यका ट्राफिकको नेतृत्व परिवर्तन भएको। नयाँ नेतृत्वले केही परीवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ, मतलब आधुनिकीकरण गर्न खोज्नु भएको छ। यसमा हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ भन्ने म ठान्छु।
तर, कतिपय स्थानमा ट्राफिक व्यस्थापन हिजोको भन्दा दय...
निराजन श्रेष्ठ - के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहले सधैं भरि विदेशका चिल्ला सडकमा खिचिएका फोटोहरु वा तिनका छोराछोरीले विदेश गएर विदेशका चिल्ला सडक छेउमा खिचिएका फोटोहरु फेसबुकमा पोष्टिएकोमा मख्ख भई बस्ने? के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व आफैंले केही गर्न सक्छौं, आफैंले केही सपना देख्न सक्छौं र त्यसलाई आफ्नै क्षमतमा पूरा गर्न सक्ने तागत पनि राख्छौं भन्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको हो? के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहको उच्चतम खुशी भनेको छोराछोरीले PR/Green Card पाउँदा पार्टी दिने र हर्षले उफ्रने नै हो?
निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै आयोजना सम्पन्न गर्न त्यही स्तरको प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय कौशलको आवश्यकता पर्छ, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले संकीर्ण स्वार्थ, लोभ र कुखुरेछाति बोकेर मात्र हिंड्ने हो भने चाहिं पक्कै पनि यस्ता आयोजना नेपालले बनाउन सक्ने छैनन्।
अविज्ञा नेपाल - मनलागी शुल्क लिने कुरामा त रोक्ने हिम्मत कसले उठाउला र? सबैले यस्तो नगरेका होलान् तर जोबाट असमान, भेदभाव भइरहेको छ उनीहरूमाथि यो प्रश्न हो मेरो।
म बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्यनरत् विद्यार्थी हुँ। मैले केही नलुकाई भन्नुपर्दा मसँग स्कुल पढेका साथीहरू विभिन्न कलेजमा छरिएका छन्। एउटै कलेजमा एउटै कक्षामा बस्ने साथीहरूलाई सोध्यौं भने उनीहरूको मुखबाट भिन्न–भिन्न शुल्क सुन्नु परेको छ।
जसलाई छात्रवृत्ति दिइने हो, त्यसलाई थाँती राखिएको छ। समानस्तरका विद्यार्थीमा पनि भिन्न–भिन्न शुल्क उठाइएको छ।
अच्युत राज भट्टराई - तिम्रो दोष पनि हैन यसमा
पैसामा आँखा सबैको लाग्छ
घुस खान्छौ तिमी छोरालाई महंगो शिक्षा दिन
तर 'पाप' भन्ने कुरा ले
तिम्रो छोरालाई ड्रग्स खाने बनाउँछ
घुस खान्छौ तिमी छोरीलाई महँगो ठाउँमा शिक्षा दिन
त्यो पैसा पुग्छ अर्कै ठाउँमा
घुस खान्छौ तिमी बुडीलाई गहना किन्न
बुडीको चाहना अर्कै तिर जान थाल्छ
प्रदिप सुबेदी - नौ भाई छोराछोरीमा यही एउटा त छ नि मसँग
दुःख मा साथ दे को छ
अरू छोराछोरी त लाखापाखा लागेका छन्
जेठोले श्वासनी छोराछोरी लगेर अम्रिका हानिएको दशै साल भयो
माइलो कतारमा काम गर्छ
श्वासनी छोरालाई पढाउन भन्दै
बजारमा बसेकी छे।
कान्छो खै!! कुन पार्टीको काम गर्छु भन्छ
महिनामा एसो एक दुई पटक आउँछ
जान्छ केही भन्दैन
अब ज्वरो आउँदा पनि पानी दिने त यही साइलो छोरो त होनी
छोरी सबै अर्काको घर गए
यस्को एउटी खोजेर बिहे गर्दिना पाए
मरे नि शान्तिले श्वास फेर्थेँ होला
मुख त देखाइदिनु परो भन्दै
छोरो त छैन
साइला मुख हेर्न आईजा भनेर बोलाए
उस्ले आमा भात खाँदै छु भन्यो
बिचरा भोक लागेको होला खा! बाबु खा भने
फेरि साइली छोरीको फुन बज्यो
आमा मुख हेरे भनी
हेर छोरी हेर
अब जमानै यस्ता
फुन मै मुख देख्न पाएसी तिमीहरुलाई के चाहियो र
खगेन्द्र फुयाँल - जहाँ दिनदहाडै जनता लुटिन्छन् ।
सेवा केन्द्रबाट सेवाग्राही
शिवहरी दाहाल - जो कसैको बोलि र भाषणको पछि नलागि,
आफ्नो धर्म र कर्मको पालनामा लाग्दछ ।
जो कसैको झुठो आश्वासनको प्रवाह नगरी,
लगनशिलता र कर्तव्यलाई अँगाल्दछ ।
हो, उही हो श्रमिक ।
जो विशाल मुढाहरु चिर्ने करौँतिका दाँतजस्तै, आफ्ना पाखुरीले,
जीन्दगीका झुपडिहरू सिंगार्छ ।
जो आकाशलाई छानो हालि ढुंगाको सिरानीमा मस्त निदाउँदै,
विशाल गगनचुम्बि अपार्टमेन्टहरू उभ्याउँछ र संसारलाई त्यसको रमिते बनाउँछ ।
सुजन रेग्मी - कति छचल्किए यी आँखाहरूमा आँसु, कति यादहरू यो दिल छोडेर कहिलै जान मान्दैनन्, यो प्राविधिकको मनमा पनि केहि सम्झना लुकेको छ, नपोखिकन बसिरहन सकिनँ।
जतिसुकै ठेलीहरू पढौँ,जतिसुकै सैदान्तिक बनौँ, वास्तविकता फरक हुने गर्छ। चार वर्से इन्जिनियरिङ अध्ययनमा कठोर भइसकेको मन बिस्तारै पग्लिदैछ। यही मनले भोगेका केही तथ्य पस्कन लागेको छु।
भूकम्पले थिलोथिलो पारेर पालमुनि आश्रम लिईरहेका व्यक्तिको वासस्थान निर्माणको पहिलो चरणको लगत संकलन कार्यक्रममा आफूलाई सहभागी गराउन पाउँदा केही हदसम्म खुसी मिलेको छ।
काठमाडौंको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको पाँच दिने प्रशिक्षणपछि हामी करिब ६० जना इन्जिनियर गोर्खा हानियौँ। गोरखा,जि.वि.सको कार्यालयमा आफूलाई पर्ने गाविसको नाम सुनाइयो र परिचालकसँग भेट गराइयो।
रमा भट्टराई - एक बिहानी
विहान भईसकेपछि पनि
मेरो आँखामा अध्यारो बढ्दै थियो
साझ पर्नु अघिदेखि नै
मेरो आखाँमा निष्पट्ट अध्यारो छाएको थियो ।
समय, मलाई दु:खमा चोबलेर आफू उत्सव मनाउँदै थियो।
आकाश हिजो जस्तै थियो, फरक यति थियो,
पहिला मैले आकाश उ...